Kooxda Jwxo-shiil, oo u Soo Dhigatay Culimada Diinta ee Dalka – Rasaasa News
Aug 27, 2010 dambiile, Eritrea, ethiopia, Jwxo-shiil, Ogaden, ONLF
Dardaaran waalidbaa ahaa wiilkaygiiyow waligaa sadex yeyna kuu cadhoonin; ciroole gaboobay, canug yar iyo caalim Quraan ruug ah.
Ciroole gaboobay iyo canug aan weynaa waa labada cir guduudo, ciroolaha gaboobay waa sii socdaa ee waligaa ishiisa iska ilaali. Canug aan weynaan waa cadeed soo baxaysa oo kulaylkeedu wuu ku gubi karaa, hoosna waa ka gali kartaa [cunuguna kolba sida aad ula dhaqanto ayuu kugu abaal marin].
Caalim Quraan ruug ah, cadhadiisu aduun dhan bay rogtaa, Waa Aadame uunka inala jooga laakiin haysta aqbalka Eebe weyne, sidaasi ayaa cadhadiisa laysga ilaaliyaa.
Arimahan waa arimo oday ka dardaarmay aadaminimadan ka fog in laga cadhaysiiyo saddexdan xurmoole ee aan kor ku sheegnay.
Waase aduun oo wax walba waa la arki inta la nool yahay. Caalim la caayaayo oo aan laga ceesaynin, waxaa ummada Somalida Ogadeeniya ugu horeeyey kooxda Jwxo-shiil.
Sheekh Maxamed Umal, Eebe weyne xaqii uu jideeyey ayuu cadeeyey isaga oo aan cidna waxba u dhimin, in lagu ceebiyaa sow caqiido xumo ma aha.
Sheekh Maxamed Umal, waxaa uu degan yahay dalka Kenya oo ay xukunto xukuumad aan Islaam ahayn. Wax buu ku bartay, wuu ku ceeshay, waligiina isga iyo islaamka degan midna laguma odhan Eebeweyne ma caabudi kartaan.
Dalka Kenya Muslimiinta ku nool waa 10% tirada dadka dalka, meesha dalka Itobiya muslimiinta ku nool ay 45-50% tirada dadka dalka degan ka yihiin.
Dadka Somalidu waxay degan yihiin gabalka ugu yar gabalada dalka Kenya, dadka Somalida ah ee degan Itobiya ay lee yihiin gabalka 2aad ee ugu balaadhan gabalada Itobiya.
Dhinaca xoriyada dhaqdhaqaaqa dadka ku nool dalka Kenya, Aqoonsi la,aan way adag tahay in ay dadku joogaan magaalooyinka iyo miyiga dalka.
Itobiya dadku si xor ah ayey meel kasta oo ay dalka ka doonaan ku tagi karaan iyaga oo aan wadan waraaqo Aqoonsi.
Iyada oo xaalka gabalku sidaas yahay, waxaan aad ula yaabay kalmadaha ay adeegsanayaan kooxda Jwxo-shiil, ee odhanaya sidee ayuu urur Islaam ah [uwslf] ula heshiin karaa dal Gaalo ah.
Waxaan is idhi kooxda Jwxo-shiil, waxaa u qarsoon arimaha lagu xanto ee xag jirnimada ah [argagixiso]. Hadana, kolkaan dib u dhawro horjoogahooda shuuciga ah ee isaga oo 80 jira siduu doono Sallaada Eebe ka yeela, ayaan dhahaa maya. Waxaase dhab ah in shuuciyadu “diinlaantu” [atheism], ay raacdo uun kobta ay isleedahay dan baa kuugu jirta, iyada oo aan mabda,a iyo diin midna xurmaynayn.
Shuuciyada hogaanka u haysa kooxda Jwxo-shiil, waa mida masuulka ka ah in la ceebeeyo culimda diinta ee cadeeyey waxa ay ka qabaan wadiifada wanaagsan ee dhexmartay dawlada iyo ururka Uwslf.
Kooxda Jwxo-shiil, ee sumaysan caydan ayey maanta ummada Somalida Ogadeeniya u tahay waxa ay boggaga internetka ku qorayaan ee ay caayayaan culimada. Waxaan leeyahay caydu waa af ee wayba dili lahaayeen hadii ay joogto culimadu meel ay wax ku yeeli karaan.
Kooxda Jwxo-shiil, xishood la,aanta iyo xadhka goysnimada waa u caado, oo Jwxo-shiil buu ahaa kii ku dilay 7da suldaan ee Abraahiin gabalka wardheer.
Dhoobaweyna wuxuu ku dilay 6 ka mid ah cuqaasha Bahgari, kolkii la waydiiyey Jwxo-shiil, maxaad cuqaasha u laysayna waxaa uu ku jawaabay jaajuusiin bay ahaayeen.
Ugu dambayntiina Jwxo-shiil, wuxuu laayey muslimiin [uwslf] mujaahidiin ah oo u dagaalamayey dhulka Somalida Ogadeeniya. Waxaa kale oo uu dhagta dhiiga u daray naftood hurayaal badan oo ONLF ah.
Jwxo-shiil iyo kuwa beenta u faafiya ee aan ka ceesayn culimo iyo caaqil midna, ayaanteedada ayaa lala xisaabtami doonaa idamka Eebe.
Ummada Somalida Ogadeeniyana danteedu waxay ku jirtaa in ay wax la qabsadaan dawlada ay ka midka yihiin ee Itobiya, oo marka la babar dhigo dalka aynu dariska nahay ee Kenya ee ay degan yihiin dadka aynu isku mustawaha nahay in aynu waxyaabo badan kaga wanaagsan nahay, marka laga tago dhinaca dhaqaalaha iyo dimoqraatiyada.